Naya Drishti | रातीराती देउवा निवासमा किन गए, माधब नेपाल र भिम रावल ? यस्तो छ - कारण - Naya Drishti रातीराती देउवा निवासमा किन गए, माधब नेपाल र भिम रावल ? यस्तो छ - कारण - Naya Drishti
रातीराती देउवा निवासमा किन गए, माधब नेपाल र भिम रावल ? यस्तो छ – कारण
वैशाख २८, काठमाडौं । एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मंगलवार साँझ ( करिव ९ बजे ) बुढानिलकण्ठ पुगेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई भेट्न एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल मंगलवार साँझ साँझ अवेर देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका हुन् । नेपाललाई दह्रिलो साथ दिइरहेका अर्का नेता भीम रावल पनि देउवासँगको वार्तामा सहभागी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन दिएको समयभित्र माधव समुहका सांसदहरुले सामुहीक राजिनामा नदिएपछि वैकल्पिक सरकारको दावी पेश गर्न प्रयासरत कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा यतिवेला दवावमा छन । यसअघि नेपाल र रावलले देउवालाई आफूहरु ओली सरकार ढाल्न आवश्यक सांसदको राजीनामा गराउन तयार रहेको आश्वासन दिएका थिए । जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले देउवालाइ साथ नदिने भएपछि माधव नेपाल पक्षले राजिनामा दिदाका वखत मात्र देउवाको नेतृत्वमा बहुमत जट्छ । तर नेपाल पक्षमै राजीनामा दिने, पार्टी फुटाउने र कांग्रेसको सरकार बनाउन सघाउने विषयमा एकमत हुन सकेको छैन ।
नेपाल पक्षको स्थायी कमिटीको भर्चुअल बैठकमा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताले सरकार गठनमा कसैको सहयोगी बन्ने भन्दा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै एकताका लागि दबाब दिनुपर्ने मत राखेपछि संकटमा परेका नेता नेपाल देउवालाई भेट्न गएका हुन् ।
नेपाल पक्षले राजीनामा दिएर कांग्रेसको सरकार बनाउन सघाउने आश्वासन दिए बाफत कांग्रेस र माओवादीले उपचुनावमा राजीनामा गरेका एमालेका सांसदलाई जिताउनुपर्ने प्रतिबद्धता मागेको बताइन्छ । सोही बिषयमा कुरा गर्न माधव नेपालले देउवा सँग भेट गरेका हुन्सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
मंगलवारै बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई समेत समेटर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा गरे सरकार गठनमा संख्या पुग्ने देउवाको बुझाइ छ ।
तर यस्तो छ नेपाल समूहको स्थायी कमिटी निष्कर्ष :
मंगलबार नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरुबीच ‘भर्चुअल माध्यम’मार्फत अनौपचारिक बैठक भएको थियो ।
बैठकमा पछिल्लो परिस्थितिको विश्लेषण भएको र ठोस कुनै निर्णय नभएको र अहिले सामान्य परिस्थितको विश्लेषण गरिएको बताइएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले नयाँ सरकार गठनप्रति आफूहरुको धेरै सरोकार नभएको र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कसरी आफ्ना शर्त मनाउने भन्ने विषयबारे बैठकमा छलफल भएको बताएका छन ।
‘सरकारमा हाम्रो भूमिका केही पनि हुँदैन, सरकारसँग हाम्रो ममिला जोडिएको पनि छैन् । जोड्ने प्रयत्न कतिपयले गरेका होलान । बाहिरबाटै धेरै प्रयत्न भइरहेको छ।’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकि पदमुक्त भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकारका लागि दलहरुलाई ३० बैशाख सम्मको समय दिएकी छिन् ।
यसै सन्दर्भमा छलफल गर्न बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीसहितको बैठकले जसपा र माधव नेपालको समेत सहयोगमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ।
यसप्रति भुसालले भने, ‘हरेक राजनीतिक पार्टी भित्रका कुरामा अरु पार्टीहरुले कसरी विश्लेषण गर्ने, आफ्नो हितमा, आफ्नो नीतिको हितमा भन्ने कुरा त हुन्छ नै । त्यस्तो प्रयास हामी पनि गर्छौं । तर, हाम्रो तर्फबाट अहिलेको हाम्रो विवाद यो सरकार बन्ने र नबन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन ।’
कतिपयले नेपाल समूहले राजीनामा दिएर भएपनि कांगेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सघाउने बताइ रहेका छन् । भुसाल यसलाई खण्डन गर्दै आफूहरुको जोड ओलीलाई आफ्ना शर्त मनाउनेमा भएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले ओलीजीलाई तपाईंले गलत काम गर्नुभएको छ। के–के मा गलत गर्नु भएको छ, हामीले भनेका छौं । धेरै कुराहरुलाई जेठ २ गते लैजानुहोस् भनेका छौं ।’ आफूहरुको थप कदम भने ओलीले लिने निर्णयमा भर पर्ने उनको भनाइ छ। ‘अब उहाँले के गर्नुहुन्छ , त्यो गरेपछि हामीले आफ्नो विचार बनाउँछौं,’ भुसालले भने।
यसैबीच आज संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन जसपा र एमालेको माधव नेपाल पक्षको समेत साथ लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलवार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीसहितको बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र सिंगै जसपा र माधव नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुटाउने कोसिस गर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले बताए ।
हाल काङ्ग्रेस संग ६१ र माओवादी संग ४९ सिट छ । ३२ सिट भएको जसपामा उपेन्द्र र महन्त पक्षमा १६(१६ सिट छ । तर महन्त पक्षले नया सरकार गठनमा सहभागी नहुने बताएको छ । यदि सिंगो जसपा सरकारमा सहभागी नभएमा कांग्रेस नेतृत्वको गथाबंधना लाई बहुमत पुग्दैन । कि त माधब पक्षले राजीनामा दिनु पर्छ ।
#रावल #माधब #देउवा